Shootout 3D 1.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Shootout 3D
Shootout 3D ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဗိုလ်လုချိန် 3D ၌သငျကောငျးမကောငျး, left အပေါင်းတို့နှင့်ဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ပွတ်ဆွဲရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်သူကကျော်ဂိမ်းရဲ့ပစ်ခတ်ဖို့ screen ပေါ်မှာထိပုတ်ပါ, သို့သော်သင်ကောင်းတစ်ဦးကောင်လေး hit ပါဘူးသေချာပါစေ။ အဆင့်၏အဆုံးကိုရောက်ရှိနှင့်ဂိမ်းအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြီးအကဲတွေဆန့်ကျင်ပယ်ရင်ဆိုင်ရ!
အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ 3D features:
- Crazy ragdoll ရူပဗေဒ
အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ 3D စာရင်းသွင်း
အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုအားလုံးအတှကျဗိုလ်လုချိန် 3D Subscribe to:
* သွေးသက်ရောက်မှု VFX
ဂိမ်းထဲကနေ Non-optional ကိုကြော်ငြာဖယ်ရှားပေးထားတဲ့ * ဘယ်သူမျှမကကြော်ငြာ,
အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ 3D VIP အသင်းဝင် access ကိုနှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် option များကိုလည်းကမ်းလှမ်းထား:
1)3နေ့ရက်ကိုအခမဲ့အစမ်းကာလပြီးနောက်တစ်ပတ်ကို $ 5,49 ကုန်ကျတစ်ဦးကအပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း။
2) တစ်လလျှင် $ 14,49 ကုန်ကျတစ်ဦးကလစဉ်ကြေးပေးသွင်း။
ဒီ subscription ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်, သင်သော့ဖွင့်တော်မူမည် အသွေးတော်သက်ရောက်မှု vfx နှင့်ဂိမ်းထဲကနေ Non-optional ကိုကြော်ငြာတွေဖယ်ရှားပေးထားတဲ့ဂိမ်းအတွက်သုံးစွဲဖို့သီးသန့်ကောင်းဘွိုင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ကြော်ငြာမပါ။ ဒါကတစ်ခု Auto-ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကြေးပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပေးချေမှုအတည်ပြုချက်ကိုအပြီးသင့်အကောင့်မှတရားစွဲဆိုထားသည်။ သငျသညျကာလကြီးစွန်းမတိုင်မီ 24 နာရီနှုတ်ထွက်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါကြေးပေးသွင်းပြုပြင်ခြင်းရှိ၏။ သင့်အကောင့်ကိုလည်းသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်
ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် subscription ကိုသက်တမ်းတိုး၏အဆုံး:
- အဆိုပါငွေပေးချေဝယ်ယူ၏အတည်ပြုချက်အပြီးသင့်ရဲ့ iTunes ကိုအကောင့်တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်
- သင်ကလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီ 24 နာရီနှုတ်ထွက်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါကြေးပေးသွင်းပြုပြင်ခြင်းရှိ၏
- အဆိုပါအကောင့် 24 နာရီအပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း၏စံကုန်ကျစရိတ်မှာလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်
- အဆိုပါအသုံးပြုသူ store မှာဝယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသူရဲ့အကောင့်ဆက်တင်များကိုရယူနေဖြင့်စာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့် Auto-သက်တမ်းတိုးစီမံခန့်ခွဲစေခြင်းငှါ
- လက်ရှိ subscription ကိုမဖျက်သိမ်းခြင်းတက်ကြွစွာကြေးပေးသွင်းကာလအတွင်းခွင့်ပြုထားသည်
တစ်ဦးစမ်းသပ်သို့မဟုတ် subscription ကိုဖျက်သိမ်းပြီး:
- သင် Store မှာသင့်အကောင့်ကနေတဆင့်ဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်အခမဲ့အစမ်းကာလအတွင်းတစ်ဦးစာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နိုင်ရန်အတွက်။ ဤသည်တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မှာအနည်းဆုံး 24 နာရီအခမဲ့အစမ်းကာလမကုန်မီအမှုကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။
Shootout 3D အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Shootout 3D အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Shootout 3D အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
store2262 စတိုး34.57k
Shootout 3D ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Shootout 3D အခ်က္အလက္
အသုံးပြုရန် ကိုက်ညီမှု Android 4.4W+ (KitKat Watch)
ထုတ်လုပ်သူ Kwalee Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://privacy.servers.kwalee.com/privacy/index.html
လက်မှတ် SHA1: A5:27:51:06:5A:56:0B:6E:99:3A:1A:B3:C5:DA:83:27:13:44:3E:F1
Shootout 3D APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ